Android 11 Developer Beta တွင်အသစ်အသစ်သောအရာများနှင့်မည်သို့ထည့်သွင်းရမည် | Gadget သတင်း
ငါတို့သည် 11 က Android Developer Preview ကို ခုန်ချခြင်းများကိုရေတွက်ရာတွင်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်ပျက်နေသည့်အချိန်တွင်၎င်းသည်သတင်းများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည် Android 10 ပြသထားသောလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်နေလိမ့်မည်ဟုအလေးအနက်ပြောကြားခဲ့သည်။ လုံခြုံရေးနှင့် privacy ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာ၏။
Google သည်ထိုအက္ခရာများကို operating system ဗားရှင်းအသစ်အတွက်အမှတ်အသားအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်မှာသေချာသည်။ ဤပထမဆုံး Developer Preview သည်အဓိကအားဖြင့် developer များအနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏အက်ပလီကေးရှင်းများကိုဗားရှင်းအသစ်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းတွင်ပါဝင်သည် အပြောင်းအလဲနှင့်သတင်းများ ဒါကငါတို့ Android ကိုဘယ်လိုသုံးမယ်ဆိုတာပြောင်းလဲလိမ့်မယ်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏အရေးကြီးဆုံးသတင်းနှင့်မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
1 Android 11 သတင်း
1.4 Programmable မှောင်မိုက် mode ကို
2 Android 11 Developer ကိုထည့်သွင်းနည်း
2.1 လိုက်ဖက်တဲ့ devices များ
2.2 USB debugging ကို Enable လုပ်ပါ
2.3 ပလက်ဖောင်း - tools တွေကို download လုပ်ပါ
2.4 Bootloader ကိုဖွင့်ပါ
Android 11 သတင်း
အန်းဒရွိုက်နှင့် iOS အသုံးပြုသူများကအလွန်တရာ ၀ ယ်လိုအားအလွန်များသောအရာသည်ယခုအချိန်တွင်ဖြစ်ပျက်လာသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ယူလာပါ။ Android 11 ကိုအထောက်အပံ့ပေးသည် အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများကိုလုံလုံခြုံခြုံသိမ်းဆည်းပြီးရယူပါ.
Google သည်၎င်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များစွာကိုမပေးရသေးပါ။ ၎င်းသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောထပ်ဆောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းကိုတရား ၀ င်စေရန်ပြည်နယ်မှအတည်ပြုရန်အမြဲတမ်းလိုအပ်သည်။
Android 11 မှာ utility တစ်ခုပါဝင်တယ် ဗွီဒီယိုကိုမျက်နှာပြင်ရိုက်ကူးပါ, အကြောင်းကြားစာကုလားကာ၏အမြန် setting ကိုမှ။ ၎င်းသည် Android 10 တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သော tool နှင့်ဆင်တူသော်လည်းယခု shutdown menu ကိုအသုံးမပြုဘဲအလွယ်တကူ activate လုပ်နိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဖွင့်ထားခြင်းအပြင်, ADB command များကိုမလိုအပ်ပါ။ အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သောအရာ။
Android 11 ဖြင့်တည်နေရာသို့သာမကမိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်ကင်မရာတို့ကိုပါဝင်ရောက်ခွင့်တောင်းခံသည့် application များအတွက်ထူးခြားသောခွင့်ပြုချက်ကိုပေါင်းစပ်ထားသဖြင့်အသုံးပြုသူများကပေးနိုင်ပါသည် ယာယီခွင့်ပြုမိန့် သင့်လျှောက်လွှာများသို့ ဂူဂဲလ်ကလည်းအထောက်အပံ့ကိုတိုးတက်လိမ့်မယ် ဇီဝဗေဒကြီးမားသောမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန် authenticators အမျိုးအစားသုံးမျိုးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ၎င်းသည်လည်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုကို catalog ပြုလုပ်ရန်အတွက်အသုံးပြုသူရွေးစရာများကိုလည်းပေးလိမ့်မည် စပမ်း, သို့မဟုတ်, အဆက်အသွယ်အဖြစ်အသုံးပြုသူထည့်ပါ။
Programmable မှောင်မိုက် mode ကို
နောက်ဆုံးတွင် Android 10 ဖြင့် shortcut ဖြင့်အမှောင်စနစ်ရောက်ရှိလာပြီး Android 11 တွင်အရည်အသွေးပိုများလာသည်။ ယခုသင်လုပ်နိုင်သည် အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းအနက်ရောင်ဝတ်ဆင်ရန်မိုဘိုင်းကိုစီစဉ်ပါ။ ကိရိယာချိန်ညှိချက်များမှသင်၌မှောင်မိုက်သော mode သည်မိုk်းမလင်းမှီမှအရက်သောက်သို့အလိုအလျောက်ဖွင့်သည်သို့မဟုတ်နာရီကိုလက်ဖြင့်တပ်ဆင်ရန်သင်ရွေးချယ်နိုင်သည့်အခွင့်အရေးရှိသည်။ ၎င်းသည် iOS တွင်ရရှိနိုင်သည့်အချိန်ကာလကိုပြုပြင်ရန်ရွေးချယ်စရာမရှိပဲရရှိနိုင်သောအရာဖြစ်သည်။
သိမ်မွေ့ပေမယ့်အရေးကြီးတဲ့ပြောင်းလဲမှုကအခုငါတို့လွတ်မြောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး ဘလူးတုသ် လေယာဉ်ပျံစနစ်ကိုဖွင့်သည့်အခါများစွာသောသူများအတွက်ပြversionsနာဖြစ်သည့်လက်ရှိ Android ဗားရှင်းများကဲ့သို့ဖြစ်သကဲ့သို့၎င်းသည်ဝယ်လိုအားအလွန်များပြီး၎င်းတို့ကိုထည့်သွင်းထားသည်။ လေယာဉ်ပျံ mode ကိုဆက်လက်ပိတ်ထားလိမ့်မယ် ဝိုင်ဖိုင်သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းကွန်ယက်။
Android 11 မှာစကားဝိုင်းများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္includesများပါ ၀ င်သည်။ သို့မှသာသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအက်ပလီကေးရှင်းများမှကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောစကားဝိုင်းများကိုချက်ချင်းရှာတွေ့နိုင်ပြီး၊ပြီးသား Facebook Messenger ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်) ။ အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများကိုအသုံးပြုနေလျှင်ပင်စကားဝိုင်းများကိုကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ က ရေပေါ်ပူဖောင်း မက်ဆေ့ခ်ျအသစ်တစ်ခုကိုသင်ရသောအခါ၎င်းကိုအသာပုတ်ပါကသင်တတ်နိုင်သည့်ရေပေါ် ၀ င်းဒိုးတစ်ခုပေါ်လာမည် chat နှင့် reply ကိုကြည့်ပါ။ ၎င်းတို့ကို Notification settings မှ activate လုပ်ရမည်။
Android 11 သည်ရုပ်ပုံများနှင့်စကားပြောသောအသိပေးချက်များကိုပြန်လည်ဖြေကြားနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုထပ်မံဖြည့်စွက်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသိပေးကြေငြာခြင်းဘောင်မှသာမန်စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုကိုရနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအချိန်ကုန်သက်သာစေသည်။
Android ဗားရှင်းသစ်အားလုံးနီးပါးတွင်ခွင့်ပြုချက်များပြင်ဆင်ခြင်းအချို့ရှိသည်။ ဤတစ်ကြိမ်တွင်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည့်အခါမှသာလျှောက်လွှာတစ်ခုကိုခွင့်ပြုပါတံခါးကိုအမြဲတမ်းဖွင့်လို့မရဘူး
တည်နေရာဖြစ်လျှင်အလားတူဖြစ်ပျက်သည်။ ယခု၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်သာခွင့်ပြုချက်ပေးသည် မေးခွန်းအတွက်လျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုမှသာကျွန်ုပ်တို့တည်နေရာကိုအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများ၏ဘက်ထရီကိုကယ်တင်ရန်ကူညီပေးသောအရာ။ တည်နေရာကိုအစဉ်အမြဲထားခဲ့ရန်ရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သူမည်သူမဆိုရရှိနိုင်သည်။
developer များကဤအရာကိုလုံးဝတွန့်ဆုတ်ကြသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သုံးစွဲသူများအားလုံးတန်ဖိုးထားရမည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည် အက်ပ်များသည်သီးသန့်ဖိုင်တွဲကိုသာသီးသန့်ရယူနိုင်သည် နှင့်ယခုအချိန်အထိဖြစ်ပျက်အဖြစ်ငါတို့ပစ္စည်းအားလုံးကိုမဟုတ်။ developer များအနေဖြင့်အစဉ်အလာအရအစဉ်အလာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး Android 11 ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းထွက်ပေါ်လာသည့်အခါပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။
ငါတောင့်တပြီး Android 11 သို့နောက်ဆုံးထည့်လိုက်သောအရာတစ်ခုမှာ application ထဲသို့ menu ထဲသို့ထည့်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည် လျင်မြန်စွာမျှဝေပါ မည်သည့်ဖိုင်အမျိုးအစားမဆို၊ ဤနည်းဖြင့်သင်ပထမ ဦး ဆုံးရွေးချယ်မှုများထဲမှအလိုရှိသော application သည်ထွက်ပေါ်လာလျှင်ဖြစ်စေ၊
Android 11 Developer ကိုထည့်သွင်းနည်း
ဤဗားရှင်းသည်ပုံမှန် update မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုလက်ခံရရှိရန်စာရင်းသွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ ကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းရန်လိုသည်, နှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့စက်ပစ္စည်း၏မှတ်ဉာဏ်တွင်ရှိသောအရာအားလုံးကိုဆုံးရှုံးခြင်းကိုဆိုလိုသည်၊ သို့မှသာဤအရာသည်မဖြစ်နိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့အရန်ကူးခြင်းကိုကြိုတင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကျနော်တို့ bootloader ဖွင့်ထားနှင့် USB debugging activated ရပါမည်။
လာမည့် Pixel 4A / XL
USB debugging ကို Enable လုပ်ပါ
စတင်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် developer ရွေးချယ်စရာများကိုသက် ၀ င်စေရမည် 'Settings'> 'ဖုန်းအချက်အလက်' နှင့် 'compilation နံပါတ်' ပေါ်တွင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ပြီးပြီဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည် developer ရွေးချယ်မှုများကိုရရှိနိုင်သည် 'Settings'> 'System' နှင့် USB Debugging ကိုသက်ဝင်စေပါ။
ပလက်ဖောင်း - tools တွေကို download လုပ်ပါ
ပလက်ဖောင်း - ကိရိယာများ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ကိုင်ဖုန်းကို command window မှတစ်ဆင့်ပြုပြင်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ကိရိယာများဖြစ်သည်။ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်မှကူးယူပါလိမ့်မည် ပလက်ဖောင်း - ကိရိယာများ Google ၏။ ကျနော်တို့မှဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ် ZIP ဖိုင်ကို unzip လုပ်ပါ.
သော့ဖွင့်ရန် bootloader ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုကွန်ပျူတာဖြင့်ဆက်သွယ်ရမည် ယူအက်​​စ်ဘီပြီးရင် command window ထဲမှာ folder ထဲကနေအောက်ပါ command ကိုလုပ်ပါ ပလက်ဖောင်း - ကိရိယာများ:
> adb reboot bootloader ကို
> flashb သော့ဖွင့် fastboot
ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ရမည့်အသံအတိုးအကျယ်ခလုတ်များကိုအသုံးပြုပါ "bootloader ကိုသော့ဖွင့်ပါ" ပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်အတည်ပြုပါ။
USB debugging ကိုသက်ဝင်စေပြီး Bootloader ကိုသော့ဖွင့်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းကိုကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဤရိုးရှင်းသောအဆင့်များသာရှိသည်။
ကုန်ချ Android 11 Developer Factory Rom သင်၏ terminal နှင့်သက်ဆိုင်သည် ဇင် el ZIP ဖိုင်.
unzipped ဖိုင်တွဲကိုဖွင့်ပြီးဖိုင်တွဲထဲရှိဖိုင်အားလုံးကိုကူးယူပါ ပလက်ဖောင်း - ကိရိယာများ။
ပြေးပါ flash ကို-all.bat ငါတို့၌တည်လျှင် Windows ကို, ဒါမှမဟုတ် flash-all.sh ကျွန်တော်၌ရှိလျှင် Linux သို့မဟုတ် Mac ။
အန်းဒရွိုက် 11 သင်၏ Pixel တွင်ထည့်ပြီးဖြစ်သည်။ သတိရပါ ဒေတာအားလုံးဖျက်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » လဲ tutorial » Android 11 Developer Beta တွင်အသစ်အဆန်းများနှင့်မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း
သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ Netflix အကောင့်ကိုအသုံးပြုနေသည်ကိုမည်သို့စစ်ဆေးရမည်နည်း